आत्महत्या रोकथाम दिवस : आत्महत्या रोक्न जनचेतना – Sulsule
आत्महत्या रोकथाम दिवस : आत्महत्या रोक्न जनचेतना
सुलसुले २०७७ भदौ २५ गते १६:३१ मा प्रकाशित
आज ‘विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस’ नेपालसहित विश्वभरि नै विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले “आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य” भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै यो दिवस मनाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना भाइरसको समयमा २० देखि ३० प्रतिशत बढी आत्महत्या हुने गरेको बताए । उनले मन्त्रालयले आत्महत्या रोकथाम गर्नका लागि केही नीति ल्याएर लागू गरेकोसमेत बताए । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको अवस्थामा साथीभाइसँग कुराकानी र छलफल गर्ने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरे ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले आत्महत्या रोक्नका लागि साताव्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको बताए । मङ्गलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्महत्या रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मनोचिकित्सकसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।
यस्तै महाशाखाले आत्महत्या रोकथामका लागि नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखासमेत गठन गरिएको छ । उक्त शाखाका प्रमुख डा. फणिन्द्रप्रसाद बरालले कोभिड–१९ का कारणले भौतिकरूपमा उपस्थित हुन नसकेकाले भर्चुअल माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको राससलाई बताए । उनले आत्महत्याबाट बच्न र आत्महत्याको सोच आउन कम गराउने बारेमा जनचेतना जगाइरहेको जानकारी दिए । उनले आजैदेखि पाटन मानसिक अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइनसमेत सञ्चालन गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका मानसिक रोग विभागका प्रमुख डा. सरोजप्रसाद ओझाले आत्महत्या रोकथामका लागि सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले आत्महत्याका लागि प्रयोग हुने किटनाशक औषधि, डोरी र मादकपदार्थ सजिलै विक्रीवितरण गर्नमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
शेयर बजार परिसुचक २९ सय २० बिन्दुमा